Fampianarana dihy eto Mahajanga: fanabezana sy fampivelarana ny tanora | Région Boeny
Nanatanteraka fifampiarabahana taom-baovao sy fankalazana ny tsingerin-taona faha-27 niforonanany ny klioba « Jeunes rockers », tao amin’ny « Les Roches Rouges », ny 07 janoary 2017.
Mpampianatra dihy, mpanorina ny klioba ary ireo mpianatra dihy, notron’ny Ben’ny tanànan’I Mahajanga, sy ireo avy amin’ny ligim-paritr’i Boeny sy ny federasionina Malagasy misahana ny dihy ara-panatanjahatena sy dihy mihaja na danses de salon no niara-nifaly nanamarika io andro io.
Teo anelanelan’ny kabary nifandimbiasana dia nisy ny fampisehoana dihy isan-karazany nataon’ireo klioba « Jeunes Mamans » sy ireo mpianatra avy ao amin’ny klioba « Jeunes rockers».
Marihina fa efa maro sy miparitaka manerana an’i Mahajanga ny fampianarana dihy ara-panatanjahatena sy ny dihy mihaja ary izany no nafahana nanangana ny ligy teto. Hisy ny fanatsarana ny fitantanana ny klioba mikasika ny dihy eto amin’ity taona 2017 ity araka ny nambaran’ny sekretera jeneralin’ny ligim-paritr’i Boeny. Tanjona dia ny fanabeazana sy fampivelarana ny tanora mba ahafahany handray anjara amin’ny fifanina eran-tany hoy izy.
Ny kaominina Mahajanga manokana dia manohana ny dihy ara-pantanjahatena sy ny dihy mihaja. Izy rahateo dia manana ny klioba antsoina hoe «Ascum Dance».
Tafiditra amin’ny fanabeazana ny tanora hatrany dia nanao fanambarana hentitra ny Ben’ny tanànan’I Mahajanga, Atoa Andriatomanga Mokhtar nandritry ity fotoana ity fa ny tanora dia tsy tokony hamidy amin’ny zava-pisotro mahamamo sy ny toaka izay hanaovana dokam-barotra matanjaka mitety faritra manerana ny Nosy. Ary manohana mafy izany toe-tsaina izany izy sy ireo mambra mpanatanteraka miara-miasa aminy ao amin’ny kaominina.